बच्चालाई मोबाइल हेर्ने लतबाट कसरी छुटकारा दिलाउने ? कति सहज छ त ?
सिकागो, संयुक्तराज्य अमेरिका – शनिबारको बिहान।
उनी पाइजामामै छन् तर उनको माइक्रोफोन जडित हेडफोनमा नीलो बत्ती बल्न थालिसकेको छ। उनी ठूलो स्क्रीनमा बच्चाहरुको लोकप्रिय अनलाइन खेल ‘फोर्टनाइट’ खेल्न थालिसकेका छन्।
‘लौ ? मैले जित्नै लागेको थिएँ, म त मरें,’ उनी गस नाम गरेका साथीलाई भन्छन्।
तर, 11 संगठनले आफ्नो सूचीमा यस्तो प्रवृत्तिलाई ‘गेमिङ हलचल वा गडबडी’ भनेको छ। डिजिटल खेलले सम्बन्धहरु, स्कुल र काममा गम्भीर रुपमै व्यवधान ल्याउँछ। अमेरिकी स्वास्थ्य निकायहरुबाट यसका बारेमा अझै पनि अध्ययन नै भइरहेको छ।
← सबैकाे अाअाफ्नै चिन्ताः मेलम्चीमा नयाँ ठेक्का नगर्न चेतावनी
बैंक अफ काठमाण्डूको खुद नाफा ३३ प्रतिशतले वृद्धि, प्रतिशेयर अाम्दानी कति ? →